USA, 15 November 2012
Ambassador Wharton said on Thursday Washington will continue backing efforts by Zimbabweans to create a prosperous and healthy society
U.S. Embassy Hosts Hightech Workshop For Innovators
Counselor for Public Affairs at the U.S. Embassy Sharon Hudson-Dean, said the session will set the tone for this year’s Apps4Africa Business Challenge competition which attracted 300 participants from 20 nations last year.
Troubled Air Zimbabwe to Resume Flights
The airline’s acting chief executive Innocent Mavhunga confirmed that they will be taking to the skies soon but declined to comment any further.
Zimbabweans say is not surprising that President Barack Obama and Republican challenger Mitt Romney showed no interest in Southern African affairs as Americans are concerned about the current state of the economy and world terrorism.
Political analysts and activists told VOA Zimbabwe should introduce such debates in order to promote the spirit of democracy.
US Ambassador-Designate Excited Over Zimbabwe Mission
A statement released Friday by the US Embassy said the ambassador, who was sworn in September 10, is expected in Zimbabwe next week.
Zimbabweans in USA to Stage Anti-Mugabe Demos
President Mugabe is expected to address the United Nations General Assembly in New York this week.
Mombeshora said donors are pleased with the success and progress that Zimbabwe is making in implementing HIV/Aids programs
Report by Sithandekile Mhlanga
Bunjee-Jumping Firm in Victoria Falls, Zimbabwe, Awaits Cord Test Results
Victoria Falls Bunjee operator Mike Davies said the failed cord has been sent to South Africa for testing to determine why it failed
Most Zimbabweans applauded the US raid that ended the life of Osama Bin Laden, but some said he should have been put on trial